MIA - Tononkira Malagasy - serasera.org
Nampiditra : latino
Tamin'ny : 08/02/2005 07:52:15
efa nivoaka ny album ny Mia voalohany tamin'ny janoary teo dia mba nividy aho.raha ny tena marina aloha dia mbola artiste tsy dia fantatro loatra izy ity fa mba liana fotsiny aho satria mahatsapa aho fa tokony mba ho henoina koa ireo artiste vaovao eto amy tanànà fa tsy ny eo ihany no hita eo!
nohenoiko daholo ireo hira ireo;hira 10 izany no ao dia ilay anarany hoe "miantso anao ho tia"
hafa kely ohatriny titre ihany koa aloha ny sariny eo amilay izy!
tena tiako daholo ny hirany,tsara,mahafinaritra!tena milay be izany le izy fa dia MAZOTO MIVIDY DAHOLO E!
mila toky avy aminao
rivomanatsifa (10/07/2016 06:57:41)
Za kou ary mitady fa tsy mety maita
golden2015 (18/12/2015 14:29:10)
sao dia mba misy amitsika ato manana ny Album complet an' i Mia fa tena nitady hatraiza hatraiza aho de tsy nahita sahiko vidina rah mbola 20 000 ar ny CD audio
ramasyl (10/04/2007 06:29:39)
"mia"aloha dia isan ny mpihira ankafiziko,araka ilay voalaza hoe manana ny mahaizy azy manokana ,manantena sy mino aho fa ho tena lasa lavitra .
mananasy (19/10/2006 15:43:29)
Mba te-hahafantatra hoe aiza no mety ahafahana mividy ny CD-ny fa mba misy hira tiako mantsy. Misy ve aty Paris?
papozy (21/11/2005 14:41:50)
latino (08/02/2005 12:52:15)
maholy (25/06/2004 14:06:28)
mbola fifaliana be ho ahy ihany ny miresaka aminareo any ity mpanakanto izay tena hankafiziko be mintsy.tena manana personnalité be ny feony,tsotra anefa mateza fihaino!tena mino aho fa hanana ny toerany eo amin'ny tontolon'ny zavakanto malagasy sady izy koa anie mahafatifaty kely e!tena mirary azy aho ny soa rehetra!tohizo fa tena manan-talenta enao!avy aty amin'ny ilay mpakafy anao!!!
maholy (09/06/2004 08:11:13)
i mia dia teraka tamin'ny 26 novembre 1979 à antananarivo.nandao any madagascar izy tamin'ny taona 1997,hanohy ny fianarany tany Paris.ny fahafantarana azy izao dia mipetraka ao st-denis ao amin'ny nosy la réunion.izy dia nilatsaka teo amin'ny sehatrin'ny zava-kanto tamin'ny volana janoary tamin'ny ilay hira hoe "Sasatra"!efa namoaka hira telo. izy tamin'ny onja-peo dia clip iray izay mitondrany lohateny hoe "tia"ny album dia hivoaka atsy ho atsy
prisk (07/06/2004 05:47:36)
Mipetraka any Laréunion
2 ny zanany, 25 ans